KRANNODAR मा टोकोप मा बेईक व्यक्तिहरूको लागि बुकिंग होम
हामी तपाईंलाई कुनै पनि दिनमा एक नि: शुल्क भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्छौं!
किन हाम्रो निजी पेन्सन किन उत्तम
निकटतम नर्सिंग घरहरूमा किरासोडार र किरासोडोर क्षेत्रका हाम्रा निजी नर्सिंग घरहरूमा निवासको मूल्य
आज, राम्रो नर्सिंग घर एकदमै गाह्रो छ। यदि तपाईं प्रियजनलाई राज्यको बजेट संस्था दिन चाहनुहुन्न भने, त्यहाँ के अवस्था छ, त्यहाँ एक उत्कृष्ट विकल्प छ - एक निजी नर्सिंग घर "MAKKOP मा" लामो टोल "। बुढेसकालका हेरचाहका लागि पेंशन "लामो टोल" वृद्ध र अशक्त व्यक्तिहरूको लागि एक eldearing बोर्डिंग घर हो, जसले224 घण्टा मद्दत र हेरचाह गर्दछ।
ठेगाना 35 3500388, नोभिरोजनेटा यूएल, 122, Mush0-4636363636363636363636363652-462-463636363636363636363652-4-25 मोडले वर्णनमा एक त्रुटि फेला पारे? VIP-स्थिति प्राप्त गर्नुहोस्
ठेगाना प्रति। Krasnodar-जंगल, 1, p। T. T. T. T. M. P0-0-0-5-52 प्रयोग गरिएको 221-52 को मोडले वर्णनमा त्रुटि फेला पारे? VIP-स्थिति प्राप्त गर्नुहोस्
ठेगाना युएल। विश्व, 7, आवासीय दीक्षार्थी, नक्शा फाइन +7 (9118) 1 164-02-5848 कोष दैनिक, 11: 00-1-18: RES 1 :: 0-1-14: ercte0 साइटले गल्ती भेट्टाए वर्णनमा? VIP-स्थिति प्राप्त गर्नुहोस्
ठेगाना ररासोडार, किरासोडार, क्रिपगोभभकाया सडक, नक्शा फोन + + (861-022) मा वर्णन गरिएको घडीमा त्रुटि फेला पारे? VIP-स्थिति प्राप्त गर्नुहोस्
<< p> प्रत्येक पेन्सनले आफ्ना पाहुनाहरुलाई Covide-19 1 बाट बचाउन सबै उपायहरू स्वीकार गर्यो। संक्रमणको क्षमता। वायु कीटाणुनाशकको ​​लागि ब्याक्टेस्डियडिटल पुन: प्रान्तहरू छन्।
<< p> एस्टेटमा - सोचीको रिसोर्ट, सीमित संख्याहरू, किनभने हामी सबैजना बसिरहेको को लागी सबैभन्दा सहज सर्तहरू सिर्जना गर्दछौं, हामी तपाईंको भाडावालहरूको लागि पूर्ण-बितेको देखभाल प्रदान गर्दछौं। त्यहाँ iss आवास विकल्पहरू छन्: पाहुनाहरूका लागि जुन आकृतिबाट आउँदछन् र विशेष ध्यान चाहिन्छ जोसँग। प्रोग्रामहरू शारीरिक विचार गर्न डिजाइन गरिएको छ वृद्धहरुको राज्य। मूल्य तपाईको प्रियजनको राज्यमा आधारित छ।
हामी तपाईंलाई वृद्धका लागि निजी घरमा आमन्त्रित गर्दछौं किनकि चुरानाथ क्षेत्रमा सोचकी इलाकामा। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको तपाईंको पाहुनाहरूमा हेरचाह र ध्यान लिनु हो। तटबन्ध नजिकै पीसस्क नदीमा एक सुरम्य ठाउँ फेला पारेपछि पाहुनाहरूले पानीबाट हिंड्ने अवसर पाएका थिए।
हामीले हिम्मत र आवास अतिथिहरूको सर्तहरूको बारेमा अधिकतम पारदर्शी जानकारी प्रदान गर्दछौं;
हामीले थप प्रदान गर्दछौं सेवाहरू जसमा त्यहाँ एक आवश्यकता छ।
बुढापाका एक निजी नर्सिंग गृह एस्टेटमा रिसोर्ट अभिभावकत्वको अन्तर्गत र हेरचाह गरिएको नर्सहरूको निरन्तर नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूले सहायता प्राप्त गरे यदि आवश्यक भएमा आवश्यक छ।
वृद्धहरूको लागि वृद्धहरूको लागि, सबै सर्तहरू एक आरामदायी रहनको लागि सिर्जना गरिएको छ: विशेष बेढाइचाडी, बाथरूम, सुसज्जित बाथरूम।
यदि तपाइँ कर्निनोडर इलाकामा वृद्धहरूका लागि निजी निवृत्तिवरणहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको आफन्त हाम्रो लागी आउनुहोस्। हामी सभ्य जीवन सर्तहरू प्रदान गर्दछौं, हाम्रो वार्ड र हाम्रा पाहुनाहरूको स्वादिष्ट फौजलाई संतृप्त फुर्सतको प्रबन्ध गर्दछौं।
आरामदायी जीवन सर्तमा, सस्तो मूल्यको अतिरिक्त, वृद्धहरूको लागि हाम्रो भुक्तानी गरिएको पेन्सनले उच्च-गुणवत्ता फुर्सतको व्यवस्था गर्दछ:
पछि Aurra सुविधा यसको गैर-महँगो दर र राम्रा जीवन सर्तहरू द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, यो सबै पूर्ण रूपमा सम्पर्क गर्न आवश्यक छ, त्यसैले हाम्रा कर्मचारीहरूले तपाईंलाई सल्लाह दिन्छन् कुनै पनि प्रश्नहरूमा वा केवल हाम्रो नर्सिंगको साइटको साइटमा अनुप्रयोगलाई छोड्नुपर्दछ, पछि प्रबन्धकहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ।